XASAASI: Paris Saint-Germain Oo Fal Xaasidnimo Kula Kacaysa Barcelona, Neymar JR Oo Ay Real Madrid U Bandhigeen!! - Maxay Madrid Ku Jawaabtay? - Gool24.Net
XASAASI: Paris Saint-Germain Oo Fal Xaasidnimo Kula Kacaysa Barcelona, Neymar JR Oo Ay Real Madrid U Bandhigeen!! – Maxay Madrid Ku Jawaabtay?
Kooxda ree France ee Paris Saint-Germain ayaa lagu soo warramayaa inay markeeda ciyaar adag la ciyaarayso Barcelona oo ay suuqa kala iibsiga isku hayaan si gaar ahaaneedna dhawaanahan ay u kala doonayaan Neymar JR oo dhinaca Paris qayb ka ah.
Barcelona ayaa doonaysa inay dib kooxdeeda ugu soo celiso Neymar kaddib kaliya laba sano markii uu lacag 222 Milyan ah ugu wareegay dhinaca PSG.
Xiddigan ayaa lagu sifeeyay mid haatan ka murugsan inuu wakhtigaas ka tagay Barcelona waxaana uu waxkasta u samaynayaa sidii uu ugu soo laaban lahaa isaga oo sida saxaafadu qorayso shuruudo lagu xidhay si dhakhso ah u aqbalay.
Iyadoo ay sidaas tahay ayuu haatan madaxweynaha Paris Saint-Germian ee Nasser El-Khelaifi doonayaa inuu dhabarka u jeediyo kooxda Barcelona maadaama oo ay xidhiidh aan wanaagsanayn ku leeyihiin suuqa kala iibsiga.
Wargeyska Marca ayaa qoraya in Nasser uu ka cabsi qabo in heshiis uu Neymar ku baxo uu adkayn karo xidhiidhkaas xumi waxaana uu taa bedelkeeda Real Madrid oo ay cadaawad weyni ka dhaxayso Barca u bandhigay 27 jirkan.
Madaxweynaha Paris Saint-Germain ayaa la xidhiidhay dhigiisa Real Madrid ee Florentino Perez kaas oo la aaminsan yahay inuu sidoo kale aad uga helo hab ciyaareedka Neymar.
Warbixintan ayaa xusaysa in jawaabta Madrid ay tahay diidmo ay iska diidi doonto heshiiskaas balse ay bil kahor jawaabteedu sidaas ka duwanaan lahayd oo ay Neymar horay kala soo saxeexan lahayd.
Sababta haatan diidmada ku qasbaysa Real Madrid ayaa ah maadaama oo ay xilli horeba lacag aad u badan ku bixisay suuqa kala iibsiga oo ay safkeeda kusoo dartay shan xiddig oo safka koowaad ah.
Eden Hazard ayaa dhawaan kaga soo biiray Chelsea si uu sanad kaddib u buuxiyo booskii Cristiano Ronaldo sidoo kale Ferland Mendy, Luka Jovic, Rodrygo Eder Militao ayaa dhammaantood kasoo dagay Madrid.
Warka ayaa intaas ku daraya in suurogalnimada kaliya ee Real ay ugu dhaqaaqi karto Neymar ay ka dhalan karto haddii ay marka hore koox iibsata u helaan Gareth Bale oo aan haatan wax xiiso ah haysan.